Stainless simbi ndiro Vagadziri - China Isimbi isina simbi ndiro Fekitori, Vatengesi
304 brushed nickel sheet simbi yegoridhe nickel jira simbi vibration kupedzisa 304l isina simbi mahwendefa
Chii chinonzi 304 ruvara rwakapetwa simbi isina simbi?
304 simbi isina ngura waya yekudhirowa ndiro ndeye tambo-senge dhizaini pamusoro pesimbi isina simbi.
Iyi ingori tekinoroji yekugadzirisa yesimbi isina chinhu. Iko pamusoro ndeye matt, uye kune chiratidzo chekushongedzwa pairi zvakanyatsonaka, asi haigone kunzwika.
Izvo zvinowedzera kupfeka-kusagadzikana pane zvakajairwa inopenya simbi isina ngura uye inotaridzika kumberi.
Yakanaka pamusoro uye dzakasiyana nzira dzekushandisa mikana; yakanaka ngura kuramba, kureba mukurumari kupfuura zvakajairika simbi, nani ngura kuramba; yakasimba simba, saka mukana wekushandisa mahwendefa matete; yakanyanya tembiricha oxidation uye yakasimba simba, saka inogona kuramba moto; yakajairwa tembiricha kugadzirisa, ndiko kuti, nyore epurasitiki kugadzira. Nekuti hapana chikonzero chekurapwa kwepamusoro, zviri nyore uye zviri nyore kuchengetedza; yakachena, yakakwira kupera; Welding mashandiro akanaka
321 Hot inopisa akakungurusa Stainless simbi ndiro
Tsananguro nezve 321 / 321H simbi isina simbi
Iyo inochengetedza kumira kwakanaka kune intergranular ngura pane tembiricha kusvika ku800-1500 ° F (427-816 ° C) uye chromium carbide kunaya. Nekuda kwekuwedzeredzwa kwetaniani mukuumbwa, 321 Hot inopisa yakakunguridzirwa Simbi yesimbi inogona kuramba yakadzikama mune chromium carbide yekuumbwa.
321 Hot Hot akakungurutsa Stainless simbi yairema ine zvakanakira yakakwirira tembiricha nharaunda nekuda kwayo kwazvo zvemaziso zvivakwa. Inofananidzwa ne304 alloy, 321 alloy simbi isina simbi ine ductility iri nani uye kuramba kushushikana kuputsika. Uye zvakare, 304L inogona zvakare kushandiswa pakurwisa-kukurudzira uye intergranular ngura.
Alloy 321 (UNS S32100) isimbi yakasimba isina simbi. Iyo inochengetedza kumira kwakanaka kune intergranular ngura pane tembiricha kusvika ku800-1500 ° F (427-816 ° C) uye chromium carbide kunaya. Nekuda kwekuwedzeredzwa kwetaniani mukuumbwa, 321 Hot inopisa yakakunguridzirwa Simbi yesimbi inogona kuramba yakadzikama mune chromium carbide yekuumbwa. Alloy 347 inofanirwa nekuwedzera niobium uye tantalum kuti irambe yakasimba. .
Alloys 321 uye 347 anowanzo shandiswa kwenguva yakareba kushanda pa 800-1500 ° F (427-816 ° C) munzvimbo dzakakwirira dzekupisa. Kana iko kunyorera kuchisanganisa chete kupisa kana kupisa kwenguva pfupi, kuchitsiva ne 304L.
Iyo yepamusoro tembiricha mashandiro ekushandira e321 uye 347 alloys zvakare anoenderana neyavo akanaka michini zvivakwa. Zvichienzaniswa ne304, 304L, 321 uye 347 vane zvirinani kukwira kushushikana uye kusagadzikana kutsemuka kuramba. Izvi zvinobvumidza kumanikidzwa kweaya maalloys akasimba kusangana neAmerican Society yeMechanical Engineering bhaira mirau uye kumanikidza mudziyo maratidziro pane yakanyanya kupisa Naizvozvo, iyo yakanyanya kushanda tembiricha ye321 uye 347 alloys ndeye 1500 ° F (816 ° C), nepo 304, 304L inogumira kune 800 ° F (426 ° C).
321 uye Alloy 347 zvakare ine yakakwira kabhoni yezvinyorwa, yavo UNS nhamba ndeiyi: S32109 uye S34709.
409 409L Yakapetwa Isina Simbi Plate
Nhovo uremu: 1.0MT - 3.0MT
410 410s Hot akakungurutsa Stainless simbi Plate
Ndeupi musiyano uripo pakati pe409 ne410 simbi isina simbi:
409-kunze kwekuwedzera kwe titanium, modhi yakachipa kwazvo, inowanzo shandiswa senge pombi yekudzimisa mota, isimbi isina tsvina (chrome simbi), inokodzera kutungidza, mutengo wakaderera, steam pombi yekudzimisa moto, uye mutsara wemoto.
410 — Martensite (yakasimba-yakasimba chrome simbi), yakanaka yekupfeka kuramba uye isina kunaka ngura kuramba, yakakodzera kupomba. Makemikari ayo anoumbwa ane 13% chromium, 0.15% kana mashoma kabhoni uye hushoma hwemamwe maarloys epakutanga. Iyo mbishi zvinhu zvakachipa, rinobva, uye rakaomarara nekupisa kurapwa. Zvizhinji zvekushandisa zvinosanganisira mabheyaringi, zvekurapa zvishandiso uye maturusi uye zvishandiso zvemagetsi, uye zvikamu zvisingachinjiki.
410 430 430F 430LX simbi isina ngura
410 simbi isina ngura yakaenzana neChina's 1Cr13 simbi isina simbi S41000 (American AISI, ASTM). 0.01% kabhoni, 0,13% chromium 0.1 410 simbi isina simbi: yakanaka ngura kuramba, machinability, zvakajairika chinangwa mashizha, mavharuvhu.
Kuchenesa kupisa kwe 410 simbi isina ngura: solution kurapwa (° C) 800-9000 inononoka kutonhora kana 750 inotonhora kutonhora
430 simbi isina simbi ine yakanaka ngura kuramba uye yakajairika simbi giredhi, kupisa kwemagetsi kuri nani pane austenite, kupisa kwekuwedzera kwekuwedzera kuri diki pane austenite, kupisa kwekuneta, kuwedzera kugadzikana kwechinhu titanium, uye michina zvivakwa zveiyo weld saiti zvakanaka. Zvekuvaka zvekushongedza, zvikamu zvekupisa mafuta, midziyo yemumba, midziyo yemumba zvikamu.
Iyo 430F igiredhi resimbi ine yemahara-yekucheka chivakwa pane 430 simbi. Inoshandiswa mune otomatiki lathes, mabhaudhi uye nzungu.
430LX inowedzera Ti kana Nb kune 430 simbi, inoderedza C zvemukati, uye inovandudza processability uye weldability. Inoshandiswa mumatangi emvura anopisa, masystem emvura anopisa, midziyo yehutsanana, midziyo yemumba yakasimba, mabhasikoro emabhasikoro, nezvimwe.
430 Hot akakungurutsa Stainless simbi yairema
Kufananidza kwe304 simbi isina simbi uye 430 simbi isina simbi:
1. ngura kuramba: 430 simbi isina ngura ine 16.00-18.00% chromium, iyo iri yemahara isina nickel simbi. 304 simbi isina chinhu ine chromium uye nickel simbi, saka 430 simbi isina ngura kurwisa iri nani pane 304 simbi isina simbi.
2. kugadzikana: 430 simbi isina ngura ndeye ferrite, 304 simbi isina chinhu is austenitic, 304 simbi isina simbi inogadzikana kupfuura 430 simbi isina simbi,
3.kusimba: 304 simbi isina chinhu ine kusimba kwakasimba, kusimba kupfuura 430 simbi isina ngura
4.thermal conductivity: 430 simbi isina ngura ferrite iri nani pane 304 simbi isina simbi austenitic kupisa kuchinjisa kuita,
5.mechanical zvivakwa: 430 simbi isina ngura yakawedzera yakagadzika chemakemikari chinhu che titanium, iyo michina maficha eiyo saiti saiti iri nani pane 304 simbi isina simbi.
2507 Hot yakakungurutswa Stainless simbi ndiro
Chii 2507 Hot akakungurusa Stainless simbi yairema
2507 isimbi isina tsvina inonzi ferritic-austenitic (duplex). Inobatanidza zvinhu zvakawanda zvinobatsira zveferritic simbi uye austenitic simbi. Nekuti iyo simbi ine yakakwira chromium uye molybdenum, ine yakanyanyisa Kukaka kuramba pitting, crevice ngura uye yunifomu ngura. Iyo mbiri-chikamu microstructure inovimbisa kuti iyo simbi ine yakanyanya kudzvinyirira kunetseka ngura kutsemuka, uye simba remuchina zvakare rakakwirira.
Stainless simbi yekuongorora ndiro
Chii simbi isina waya yekuongorora ndiro
Stainless simbi yekuongorora ndiro: Hwendefa rekutarisa rinoshandisa giravhiti yemuchina kubaya maburi emhando dzakasiyana uye saizi pane isina simbi pamusoro.Heringbone ruva, diki denderedzwa, mhunga ruva, shanu-pini ruva, rakakomberedza rakakombama gomba, bhatani-rakaumbwa convex gomba, nezvimwewo. 1.non-slip, nguva refu yekushandisa; 2.fire yekudzivirira uye isina hunyoro, nyore kukwesha kuchena; 3.Subjectent yakanamirwa nzira yekuita inogona kuitwa pasina zvigunwe zvemunwe.
Yakakwidziridzwa simbi isina simbi
Electrolytic polishing: uchishandisa acidic electrolyte (yakasimba acid), iyo sampuli inokwenenzverwa inoiswa mune post-yazvino (ingangoita 7 mA), uye anode yaputswa. Nekuda kwehukuru hwazvino, zvikamu zvinobuda zvino nyungudika nekukurumidza, uye iyo nzvimbo inowanzoita kunge yakati sandara, ichisvika kumagumo Akakwenenzverwa mhedzisiro (mhedzisiro inogona kuoneka mukati memaminitsi gumi). Iyo yakakosha musimboti we electropolishing: yakafanana nemakemikari makorari, ndiko kuti, nekusarudza kuputsa iyo diki convex chikamu chepamusoro pechinhu kuita kuti iro nzvimbo riite mushe. Zvichienzaniswa nemakemikari makorari, mhedzisiro yecathode reaction inogona kubviswa, uye mhedzisiro iri nani.
Mechanical polishing: Yeiyo yakaoma pamusoro peiyo isina simbi ndiro kuti ibudirire yekushongedza mhedzisiro inofanirwa kunge iri: iyo roller furemu yakakwenenzverwa ne bhandi polishing muchina, kutanga ne120 # hasha bhandi, kukanda iyo yepamusoro pevara imwe kune iyo nguva, chinja iyo 240 # hasha bhandi, rikande kumusoro Kana iro ruvara rakwira, chinja iro 800 # hasha bhandi uye urikande kune yepamusoro ruvara imwe nguva. Wobva wachinja 1200 # hasha bhandi uye kukanda mhedzisiro yekushongedza iyo simbi isina simbi.